Itoobiya oo Ka Codsatay Soomaaliya iyo Jabuuti in aysan taageerin qaraarkii Jaamacadda Carabta -
HomeWararkaItoobiya oo Ka Codsatay Soomaaliya iyo Jabuuti in aysan taageerin qaraarkii Jaamacadda Carabta
Itoobiya oo Ka Codsatay Soomaaliya iyo Jabuuti in aysan taageerin qaraarkii Jaamacadda Carabta
March 23, 2020 F.G Wararka 0
Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Gedu Andargachew ayaa toddobaadkan sheegay in Mareykanka uu si cad uga eexday wada-hadallada biyo-xireenka ee ay fududeysay, kaasoo u dhaxeeyay Itobiya Masar iyo Sudan.
Wareysi gaar ah oo uu siiyay Wargeyska The Reporter, ayuu Gedu dhaleeceeyay hadalkii Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka, Steven Mnuchin ee ku saabsanaa wada-hadallada ku saabsan mashruuca biyo xireenka ee Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) isagoo sheegay inuu soo bandhigay dalab ay xitaa Masar ku dhicin inay sameeyaan.
Gedu wuxuu caddeeyay in bayaanka Waaxda Maaliyadda Mareykanka uu yahay mid aan caddaalad ahayn oo uu khilaafsan yahay danaha qaranka Itoobiya.
Itoobiya ayaa diidan inay saxiixdo Dukumentiga qabyada ee heshiiska is afgaradka uu soo bandhigay Mareykanka, iyadoo dooneysa in wada hadalada sy sii socdaan, si loo xalliyo qodobada soo ifbaxaya, isla markaana loo saxiixo dukumenti buuxa
Dukumentiga heshiiska is-afgaradka ee Mareykanku soo bandhigay wuxuu la tacaalay arrimo la xiriira keydinta biyaha iyo sii deynta biyo-xireenka Itoobiya intii lagu jiray abaarta iyo sannadaha abaarta oo daba dheeraaday iyo sannado qallalan oo daba-dheer.
“Inkasta kooxda noo qaabilsan gorgortanka ay diidanaayeen go’aanka qoraalka dukumintiga heshiiska iyo xitaa markii aan dirnay warqad muujineysa mowqifkeenna arrinkaas, Waaxda Maaliyadda Mareykanka waxay ku adkaysatay in la saxiixo waxayna ku jawaabeen inay diyaarin doonaan dukumiinti qabyo ah, maadaama dhinacyada wada xaajoodka aysan heshiis gaarin kaddib sanado wada hadal ah”ayuu ku wacday Mr Gedu.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya ayaa sheegay inay ka baxeen wada hadaladii u dambeeyay ee ku saabsanaa biyo xireenka ee lagu qabtay magaalada Washington bishii 27 Febraayo 2020. isagoo xusay inay jiraan khilaafyo u baahan in la xalliyo, loona baahan yahay in arrimahan looga hada hadlo gudaha.
“Laakiin waxaan u sheegnay Mareykanka in dariiqa uu Mareykanku qaaday ay qaldan tahay oo aan la aqbali karin,” ayuu yiri.
Mar la weydiiyay bal in Mareykanku uu garab taagan yahay Masar sababtuna tahay hoos u dhaca iskaashi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Itoobiya gaar ahaan la dagaallanka argagixisannimada, Gedu wuxuu caddeeyay in ajandaha argagixisada uu wali miiska saaran yahay, xaaladda hadda jirtana wuxuu ku baaqayaa xitaa iskaashi dheeri ah oo ka dhexeeya waddamada ka soo horjeeda argagaxisada.
Marka laga hadlayo dadaalka Masar ee cadaadiska diblomaasiyadeed ee ay ku hayso Itoobiya gaar ahaan Jaamacadda Carabta, ayuu Gedu yiri waa in ururku u istaago sidii loo heli lahaa nabadgelyo isla markaana loo soo bandhigi lahaa heshiis dhex mara waddammada halkii laga soo saari lahaa qaraar cambaarayn kara Itoobiya.
“Ma jiro mid aan ahayn Jaamacadda Carabta oo fahmi kara inta dagaal, isku dhacyo, iyo khilaafaadka ay kala daadinayaan waddamada. Inta badan waddamada adduunka dhibaatada iyo khilaafku waa xubno ka tirsan Jaamacadda Carabta “ayuu Gedu yiri oo su’aal ka keenaya in Jaamacadda Carabta doonayo nabad iyo xasillooni laga dhaliyo gobolka.
Wasiirka ayaa caddeeyay in Itoobiya weydiisatay dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya sharaxaad ku saabsan mowqifkooda ku aaddan taageerida mowqifka Jaamacadda Carabta, isagoo xusay in wadamadan ku lug lahaayeen gudbinta qaraarka cambaareynaya Itoobiya, haddana ma aaminsana in qaraarkaasi kaalin wanaagsan ka ciyaari doono inuu nabadgelyo u horseedo gobolka.
Mr Gedu ayaa sheegay in warqad ay ka heleen labadan dal (Jabuuti iyo Soomaaliya) ay u sheegeen in qaraarka ay soo gudbiyeen Jaamacadda Carabta uusan door ka ciyaari karin xallinta dhibaatada, halka uu xaalada uga sii dari karo, waxaana uu intaa ku daray inay u sheegeen in dhibaatada aan sidaas lagu xallin karin, isla markaana uu aaminsan yahay in dalalka kale ee ka tirsan Jaamacadda Carabta inay sidaas oo kale isku raaci doonaan.
Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa markii hore taageeray qaraarkii Masar horgeysay Jaamacadda Carabta ee ka dhanka ahaa Itoobiya, waxaana shirkii Golaha Wasiirada Jaamacadda Carabta ee 4-tii bishan ka dhacay Qaahira ay inta badan dalalka jaamacadda carabta ku taageereen qaraarkaas, inkastoo Sudan ay ka gaabsatay.